Mitsara Joseph Stiglitz: Iwo makumi maviri neshanu mitsara yakanyanya yaStiglitz uye ndiani | Ehupfumi Zvemari
Claudi Casals | 23/06/2021 09:00 | General hupfumi
Nguva dzose zvakanaka kuverenga, kudzidza uye kudzidza zvinhu zvitsva, kunyanya munyika yezvemari. Kuti uwane mibairo yakanaka pamusika wemasheya, iwe unofanirwa kufambirana nezviitiko zvikuru uye kuunganidza huchenjeri. Ndosaka zvichinyatso kubatsira kuziva izvo vanofunga nezvehupfumi uye vanotaura. Mushure mezvose, ivo vane mukurumbira nekuda kwehupfumi hwavakauya kuzoita kutenda kune avo ruzivo rwemari uye hunhu. Aya mazwi aJoseph Stiglitz, semuenzaniso, ane ruzivo rwakawanda nezve hupfumi uye zvematongerwo enyika nenyika.
Muchikamu chino tichaona akanakisa makumi maviri neshanu aJoseph Stiglitz. Tichataurawo nezve ndiyani economist uyu, Mubayiro weNobel Winner Piyona weRuzivo Rwehupfumi. Iwe unoda kuziva kuti ichi chii? Ndinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Aya makumi maviri neshanu mitsara yakanakisa yaJoseph Stiglitz
2 Stiglitz ndiani?
2.1 Ruzivo rwehupfumi
Aya makumi maviri neshanu mitsara yakanakisa yaJoseph Stiglitz
Sezvatatotaura, zvirevo zvaJoseph Stiglitz zvinogona kuve zvinodzidzisa uye zvinodzidzisa. Tevere tichaona iwo makumi maviri neshanu akanakisa makotesheni euyu nyanzvi yezvehupfumi.
"Mukufamba kwenguva, shanduko dzakakoshesesa dzinodiwa kuti kudyidzana kwepasi rose kushande shanduko dzekudzora kushomeka kweruzhinji."
Pamusoro pekudzikiswa kwedhora nezvakachengetedzwa: "Asi apa ndipo apo China neJapan vane dambudziko: vanounganidza madhora akawanda zvekuti, dai vaida kutengesa huwandu hwayo, dhora rinodzikisira, zvichikonzera kurasikirwa kune avo vachiri Ndakuenda.
"Urombo hwakafanana nekugara mutirongo, kugara muhuranda uchitarisira kusununguka."
Pavagari venyika dzakapfuma nezviwanikwa, nehuwori: "Ivo vangatombovaona semari yavo, sezvavaizoita dai vaipa hurumende mutero pamari yavo yavakawana zvakaoma."
"Chikonzero icho ruoko rwusingaonekwe kazhinji ruchioneka chisingaonekwe ndechekuti kazhinji harupo."
Top Iyo yepamusoro muzana ine dzimba dzakanakisa, dzidzo dzakanakisa, vanachiremba vakanakisa, uye mararamiro akanakisa, asi pane chinhu chimwe icho mari inoita kunge isina kutenga: kunzwisisa kuti yavo ramangwana rine chekuita nekuti mamwe makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe zana muzana vanorarama. Munhoroondo yese, ichi chinhu chimwe chepamusoro muzana vanoguma vadzidza. Manonoko."
"Nyika dzichiri kusimukira dzinowanzobatwa pakati pesarudzo mbiri dzisingafadzi: kumiswa kwekubhadhara, izvo zvinosanganisira kutya kuparara kwehupfumi, kana kutambirwa kwerubatsiro (zvikwereti), izvo zvinoreva kurasikirwa nehutongi hwehupfumi."
"Hunyengeri kunyepedzera kubatsira nyika dzisina kusimukira nekuvamanikidza kuvhura misika yavo kuzvinhu zvemunyika dzakasimukira uye panguva imwechete kuchengetedza misika yavo nekuti vanoita vapfumi vapfumi nevarombo varombo."
"Chiri kunetsa ndechekuti kudyidzana kwenyika dzepasi rose kuri kuburitsa nyika dzakapfuma dzine vanhu vane hurombo."
Kuwedzera kwekusaenzana kunokanganisa kuvimba; ine zvine chekuita nezvehupfumi zvakafanana neicho cheyakagadziriswa zvese. Gadzira nyika yehupfumi mune iyo kunyange ivo vanokunda vakangwarira. Uye vanorasikirwa ... Mukutengeserana kwese, mukubata kwese naboss, kambani kana mukuru webasa, vanoona ruoko rwemumwe munhu anoda kuvashandisa. "
Technologies Matekinoroji matsva (akasimbiswa nemitemo mitsva yebhizimusi) ari kusimudzira masimba emusika emakambani ane mukurumbira uye akakurisa, seMicrosoft, ayo anobva kunzvimbo dzakasimukira; "Kekutanga, mune yakakosha indasitiri yepasirese, kune padyo-wepasi rose monopolist."
"Iyi misika yemahara yemusika haina kumbobvira yavakirwa pahwaro hwakasimba hwesimba uye dzidziso, uye kunyangwe hazvo mazhinji emitemo aya aisundidzirwa kumberi, nyanzvi dzezvehupfumi dzakatsanangura kusakwana kwemisika, semuenzaniso, kana ruzivo rwusina kukwana, kureva, nguva dzose."
„Hapana anobudirira ari ega. "Kune vanhu vazhinji vakangwara, vanoshanda nesimba uye vane simba munyika dzichiri kusimukira vanoramba vari muhurombo, kwete nekuti vasina hunyanzvi, kana nekuti havasi kuyedza nesimba, asi nekuti vanoshanda mune zvisina hupfumi."
“Kubvira munhoroondo yese, hupfumi hwakasimukira ndehwe mune zvibvumirano zvakavharwa nekubata ruoko. Pasina kuvimba, kuita bhizinesi kunoenderana nekubvumirana kwekuti zvimwe zvinhu zvakaomarara zvinojekeswa mushure hazvichakwanisika. Pasina chivimbo, mumwe nemumwe anenge achitora chikamu anotarisa-tarisa kuti aone kuti sei uye varidzi vake vachamutengesa. "
“Muchidimbu, kutengeserana mahara hakuna kushanda nekuti hatina kuedza: zvibvumirano zvekutengeserana zvakapfuura zvaive zvisina kusununguka kana kururamisira. "Angave asymmetrical, achivhura misika munyika dzichiri kusimukira yezvigadzirwa kubva munyika dzakasimukira pasina kudzoreredza kuzere."
„Mutengo uyo kushaikwa kwemabasa kunotorera vashandi kwakakura uye kunonetsa kutakura. "Zvirinani basa rine muripo wakadzikira mune chaiko mashoma muzana mapoinzi pane kusiri."
Panzvimbo yeruramisiro kune vese, isu tiri kushanduka kuenda kuhurongwa hwekutonga kune avo vanogona kubhadhara. Tine mabhangi ayo asina kungokura chete kutadza, asi akakurisa kuti atongwe. «
"Kubudirira ndekwekushandura hupenyu hwevanhu, kwete kungochinja hupfumi."
„Vadzidzisi vakanakisa vachiri kudzidzisa nenzira yeSocrates, vachibvunza mibvunzo, vachipindura mhinduro nemumwezve mubvunzo. Uye mumakosi edu ese, takadzidziswa kuti chakanyanya kukosha kubvunza iwo mubvunzo chaiwo; Kubvunza mubvunzo zvakanaka, kuupindura kazhinji yaive nyaya iri nyore. "
"Kuwa kweWall Street ndeyekushambadzira dzidziso yekuti kudonha kweBerlin Wall kwaive kuchikominisi."
Kutukwa kwezviwanikwa hakusi kutemerwa; isarudzo. '' Kushandiswa kwezviwanikwa chikamu chakakosha chekudyidzana kwenyika nhasi uye, neimwe nzira, kukundikana kwenyika dzakapfuma nezviwanikwa mucherechedzo wekutadza kwekudyidzana kwenyika dzepasi rose. '
"Kuona hupfumi uhwo, munzira dzakawanda, kunyangwe hwakasiyana nehuya hwakaitika muhudiki, hunobatsira kusimbisa matambudziko: munharaunda yemunhu anotora zvakawandisa, pasina kubvunza kuti sei zvinhu zviri izvo zvavari."
Teachers Vadzidzisi vangu vakabatsira kunditungamira nekundikurudzira; asi basa rekudzidza rakasiirwa ini. "
"Kana kugadzikana nekugona kwaida kuti kuve nemisika yakawedzera kusvika mune ramangwana, uye misika iyi zvaive zvisipo, ivimbiso ipi yatinayo yekugadzikana uye kugona kwehurongwa hwemapepanhau?"
"KuWorld Bank, ndakaona ruoko rwekutanga kukuvadza kunokonzerwa nekudyidzana kwenyika dzepasi rose kune nyika dzichiri kusimukira, uye kunyanya kune varombo vari munyika idzodzo."
Iye zvino zvatinoziva mitsara yakanakisa yaJoseph Stiglitz, ngatitaurei zvishoma nezvekuti ndiani anozivikanwa nezvehupfumi. Muna 1976 akapedza kudzidza kubva kuMIT (Massachusetts Institute of Technology) uye makore mana akazotevera akawana chigaro chake kuYale. Inozivikanwa yekukunda iyo 2001 Nobel Prize muEconomics uye parizvino ari Muzvinafundo weEconomics neMari kuColumbia University.
Uye zvakare, Joseph Stiglitz aive nhengo yeKanzuru yeVanoona nezveMazano kuMutungamiri Clinton chaiye. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti aive mutevedzeri wemutungamiri weWorld Bank pakati pa1997 na2000. Yaive ipapo iyo yaakaona kwekutanga-ruoko kukura kweakakanganisa mhedzisiro iyo kudyidzana kwepasi kunogona kuita kune nyika dzichiri kusimukira.
Chimwe chokwadi chinofanirwa kutaurwa pamusoro peiyi nyanzvi yezvehupfumi ndechekuti Ndiye mumwe wevaya vane chekuita nemitemo iriko muhupfumi hwanhasi. Uye kwete izvo chete, asi zvakare mutungamiriri wehupfumi hweruzivo. Munzvimbo ino, Joseph Stiglitz anoramba achiburitsa zvidzidzo zvine chekuita nekutadza kwemusika uko mavambo ane chekuita neruzivo asymmetries. Nenzira iyi, Stiglitz ave achikwanisa kutungamira marongero ekupindira enyika huru dzakasimukira.
Akanyorawo bhuku rinonzi "The Malaise in Globalization." Izvi zvakadudzirwa mumitauro inodarika makumi maviri uye zvakakwanisa kuve chinotengesa munzvimbo dzese kwachakaburitswa.
Hupfumi hweruzivo ibazi rinodzidza mashandiro eruzivo neruzivo pacharo zvinogona kukanganisa hupfumi uye nesarudzo dzakaitwa nezvazvo. Ruzivo rwune zvakasarudzika hunhu hunoomesesa mazhinji eyakajairwa ehupfumi dzidziso:
Zviri nyore kugadzira, asi pachinzvimbo zvakaoma kutenda kana kuvimba.
Kupararira kwayo kuri nyore, asi kuzvidzora kwatova kwakaomarara.
Iyo inopesvedzera sarudzo zhinji.
Nezve iyo ruzivo sechiratidzo, yakatsanangurwa se mhando yechinhu chisina kunaka chekusava nechokwadi. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvinosanganisira ruzivo rwakakwana uye ruzivo rwesainzi semakesi akakosha. Pfungwa dzekutanga dzine chekuita nehupfumi hwemashoko dzaive dzakanangana nehupfumi hwehupfumi hwemashoko. Munguva pfupi yapfuura, kufambira mberi kwakakosha kwakaitwa zvese mukudzidza kweruzivo asymmetries uye mune zvazvinoreva pachibvumirano chechibvumirano. Izvi zvinosanganisira mukana wekutadza kwemusika.
Ndinovimba kuti mitsara yaJoseph Stiglitz yakashanda seyakakurudzira kana ruzivo. Tinofanira kugara takavhurika kuti tidzidze zvinhu zvitsva zvekuvandudza mune ese mativi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » Joseph Stiglitz Quotes